चन्दको अनधिकृत झुण्डलाई सरकारले चिन्दैनः प्रधानमन्त्री ओली - Everest Dainik - News from Nepal
चन्दको अनधिकृत झुण्डलाई सरकारले चिन्दैनः प्रधानमन्त्री ओली
विराटनगर, चैत ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई अनधिकृत झुण्डको संज्ञा दिएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगसहित कहीँकतै दर्ता नभएको समुहलाई सरकारले नचिन्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले चन्द समूह राजनीतिक दल नभएको उल्लेख गर्दै सो समूहले गरेका ध्वंसात्मक गतिविधिमाथि मात्र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरे । चन्द समुहलाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्धबारे नेकपा भित्रैबाट बिरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो समुह बारे धारणा राख्दा बिचार पुर्याउन नेताहरुलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने । बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ, अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ? गम्भीर राजनीति गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत, कानूनविपरीत, लुटपाट र आतंकका गतिविधि गर्न नपाइने बताए । फरक प्रसंगमा उनले तत्कालन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले भने, एउटा मन्त्रालय खाली छ, अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो । पुनर्गठन हुँदैन ।” एकदिनको भ्रमणका लागि विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री ओली कृषि बजारको उद्घाटनदेखि ताल निरीक्षणसम्मको कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस स्टुडियाेमै किन रोए प्रधानमन्त्री ?
प्रधानमन्त्री ओलीले मोरङको कटारी नगरपालिकामा निर्माण गरिएको कृषि बजारको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सो लगत्तै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको प्रदेश नम्बर १ का सदस्यहरुलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अपरान्ह बर्जु गाउँपालिकाको बर्जु तालको निरीक्षण र स्थानीय सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी साँझ काठमाडौं फर्कने छ । कान्तिपुरदैनिकबाट